Dawladdu waxay soo bandhigtey istiraatiijiyad cusub oo ku saabsan baarista iyo soo ogaanshaha caabuqa faafa - Mino Danmark
13/05/2020 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus /
Daqiiqadaha shir-jaraa’id ee Wasaaradda Dowlada, 12ka Maajo, 2020 Denmark ayaa wakhtiyadan ugu danbeysay kor u qaadey baarista COVID-19, waxayna hadda ka mid tahay waddamada adduunka ee dadka ugu tirada badan baartey, marka la barbar dhigo tirada dadka deggan. Laakiin waxaan u baahanahay inaan xitaa ka sii fiicnaano. Sababtoo ah haddii caabuqu mar kale soo baxo, waxaan u baahan nahay inaan ogaano waqtigiisa, sidaa darteedna waxa loo baahanyahay ogaanshaha waxtarka leh ee cudurka.
Waxaa loo baahanyahay in la fogeeyo bukaanka si aanu uga hortagno faafida cudurka, iyadoo aan mar kale bulshada la wada xirin. Waxa kaloo jirta baahi loo qabo in la hubiyo in dadka waayeelka ah iyo kuwa nugul in ay iyaguna sidoo kale ay xorriyadda iyo nolol maalmeedkooda caadiga ah ay ay ku noqoni karaan, si hadana loo arki karo carruurta iyo ayeeyooyinka/awoowooyinka.
Istaraatiijiyadda cusub ee lagu ogaanayo faafida caabuqa, waxa ka mid ah: Marka qof cudurka laga helo, masuuliyiinta waxay bilaabi doonaan todobaadnkan ka bacdi, inay ogaadaan qofka cudurka leh oo uu xiriir la lahaa qofkaas. Shakhsiyaadkaas ayaa markaa la baari karaa isla markaana karantiil ama gooni u dhigid loo galini karaaa, ka hor intuusan caabuqa sii faafin. Dowladda ayaa diyaarineysa khad toos ah, ee ka caawiya dadka cudurka qaba inay helaan xiriirka cudurka iyaga ku faafiyey, si loo hubiyo im faafinta caabuqa joojismo.
Intaas waxaa sii dheer, dowladda oo ka caawineysa degmooyinka dalka, in ay caawiyaan muwaadiniinta aan kaligood degganaan karin guryahooda.
Du er her: Mino Danmark / Dawladdu waxay soo bandhigtey istiraatiijiyad cusub oo ku saabsan baarista iyo soo ogaanshaha caabuqa faafa